ဆောင်းလူ ● မာဖီးယား မြို့တော် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၇ အန္တရာယ်ကို ရင်ဘတ်နဲ့အုပ်ပြီးဖမ်းမှရတဲ့ ဒီ မြို့တော်မှာ လုံခြုံခြင်းတွေဟာ အလုပ်လက်မဲ့ …။ ဇန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ ...
ဆောင်းလူ ● အမည်မသိများ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၆ အမည်မသိတွေများတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အမည်မသိတာ မဆန်းဘူး …။ နံနက်ခင်း ခေါင်းကြီးသတင်းကို အမည်မသိတွေ ခေါင်းခံကြတယ် …။ နေ့လည်ခင်း သတင်းစကားတွေလည်း...
ေ ဆာင်းလူ ● ရိုးမ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၆ ရိုးမ အခုချိန်ဆို ဆောင်းလေအေးနဲ့အတူ ရိုးပြတ်မီးခိုးရနံ့တွေ သင်းအူနေမှာပဲ...
ဆောင်းလူ ● ပုံမှန်မဟုတ်သော လူတယောက်နှင့် အိမ်မြှောင်ကောင် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆ အိမ်မြှောင်တကောင်က တစ်တစ် … တစ်တစ် … နဲ့ အိမ်မြှောင်သံနဲ့ စကားတွေပြောနေပြန်တယ် ……။ တနေ့...
ဆောင်းလူ ● လိင်တူချစ်သူတွေ နေတဲ့မြို့ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၆ နီယွန်မီးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီး မြို့က ညနဲ့နီးစပ်လာတာကို မြင်နေရတယ် ..။ ယောက်ယက်ခတ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ တ ထွေးကြီးကို မနိုင်မနင်းထမ်းပိုးထားပြီး လမ်းကလည်း...
ဆောင်းလူ ● ကျွ န် ပြုခြ င်း(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၆ နိုင်ငံသားတွေကို နိုင်ငံခြားသားတွေက ကျွန်ပြုတယ် …။ နိုင်ငံသားတွေကို နိုင်ငံသားအချင်းချင်းက...
ဆောင်းလူ ● လမ်း (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၀၊ ၂၀၁၆ ရေမီးအစုံ ရေညှိအဖုံဖုံ သတ္တ၀ါမျိုးစုံ အမှိုက်သရိုက်ပုံနဲ့ ၀င်ဒါမီယာရပ်ကွက်ပျက်လို လမ်း …။ ဒီလမ်းမှာ တဲအိုလည်း ရှိရဲ့ တိုက်ပြိုလည်း ရှိရဲ့...
ဆောင်းလူ ● တောခြောက်ခြင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၆ သဘာဝက အရိုးခံနဲ့ ပဉ္စလက်ဆန်ဆန် …. ဘ၀က အရုိုင်းခံနဲ့ ပြဇာတ်ဆန်ဆန် …. အရင်းရှင်ဆန်ဆန်… ဈေးဖြတ်မှုနဲ့ မွတ်သိပ်မှုကို ကုန်သွယ်တော့...
ဆောင်းလူ ● လူပျက်တွေပွဲ (မိုးမခ) မေ ၂၅၊ ၂၀၁၆ သူတို့တွေပေါ့ … အမြီးဆိုတော့လည်း အမြီး … ခေါင်းဆိုတော့လည်း ခေါင်းမို့ …။ သူတို့တွေပေါ့ … မီးဆိုတော့လည်း မီး...
ဆောင်းလူ ● ငဖား …. ကွီး .. ညေး ..ခေး ..နှင့် …ဘွီး … (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၆ စကြာဝဠာတနေရာတွင် အခြေစိုက်တည်ထားသည့် စင်္ကြ၀ဠာကျော်...
ဆောင်းလူ ● မြို့ပတ်အပြေးသမား (မိုးမခ) မေ ၁၈၊ ၂၀၁၆ ကိုယ့်မြို့ကိုယ် တပတ်ပြီး တပတ် ပတ်ပြေးနေရမယ်ဆိုတာကိုက … ငယ်အိပ်မက်လည်းမဟုတ်။ ကြီးအိပ်မက်လည်း မ ဟုတ်။ မဟုတ်လည်း ခုတော့ တပတ်ပြီး...
ဆောင်းလူ – ငဖား ဖားရိုက်ခြင်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၆၊ ၂၀၁၆ ခုတလော ငဖား၏စိတ်တို့သည် ဖားရိုက်ချင်စိတ်တို့ဖြင့် ကြီးစိုးလျှက်ရှိသည်။ ဖားမရိုက်ခင် ဖားမျိုးစိတ်ကို စူးစမ်းကြည့်မိသည်။ ဖားမဖြစ်ခင်က ယင်းတို့ကိုယ် ယင်းတို့ ငါးဟု...
ေ ဆာင်းလူ – သ တ င်းများ
ေ ဆာင်းလူ – သ တ င်းများ ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၆ သတင်းများ နံနက်ခင်း သတင်းများ...
ဆောင်းလူ – စားကောင်းရုံလုပ်ကြတဲ့ လောကကြီး (၂) (မိုးမခ) မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၆ ကျုပ်လား … ခုတော့ဗျာ … အသက်ကလည်း ကြီးလာ … အရင် ဟိုးငယ်တုန်းကလို အရာရာက...
ဆောင်းလူ – မုဆိုးရာသီ (မိုးမခ) မတ် ၁၅၊ ၂၀၁၆ မုဆိုးရာသီ ကုန်ချေပြီလို့ အပြီးသတ်ကောက်ချက်တွေ မှန်းသန်း မဆွဲကြပါနဲ့ဦး ….။ ဒီတခါ စစ်ပွဲ လေးမြားမလိုပေမယ့် ၂၁ ရာစု ငြိမ်းချမ်းရေး...
ဆောင်းလူ – ရာစုသစ် ပိုးမွှားများ မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၆ ရောင့်ရဲရ ခက်လွန်းသော အလောင်းအစားများ ဆယ်ခါလျော် တခါစားနဲ့ နာနာကျင်ကျင် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုတတ်ကြ …။ နေရာတကျမရှိသော တံခါးများ အစားထိုးမလွယ်တဲ့...